Shirka Garoowe: Xaaraan, Booli & Sadbuursi! | Moment Union Somali Diaspora
Posted on December 25, 2011 by momentunion
Somaalida midi weey duxeeysaa Calakiina loo taag, dhabanyacasta joogtana dhiigeey cabaayaan dhalaankeey siraayaan. ( Puntland ) midna waa Dabo ma leh dadka waa dareeraan doorasheey sameeysteen Tigreegeey dugsanayaan ( Somaliland ) adna ( Shariifow ) dhalaankaad ku habeeysay diintaa dacar kaaga daranoo ku rideeyay beri hore.
Nin-walbowba calankii, shariifow shirqoolkaa shabaabow shaleeydaa shaxda aad wadaan iyo shisheeyaha ku saacida, sheeydaan masáladii inta kuwa dhismaayaan kuwana dhiiga cabaayaan xagee dhaanka loo rari,maxaa leeygu dagayaa, duhur leeygu dilayaa dowladaan ahee garo !
Xilka ma waxaa loo haya in shacabka lagu gumaado mise in shacabka lagu badbaadiyo?? Soo celinta Nabada iyo difaaca qaranimada Somali ninkii tiirka u noqon lahaa haddii talada iyo masiirka dalka uusan ka muuqan miyeey nabadi imaan-kartaa ???
Xaqiiqdii dowlada waxaay ka shaqeeysaa oo kaliya magaalda Muqdisho iyada oo la ogyahay in dowlada tiir-dhaxaadkeedii shacabkii siyaasiyiintii aqoon yahankii indheer-garadkii iyo oday dhaqmeedkii reer Muqdisho aayan ka muuqan talada masiirka somalia ee Roadmapka side nabdi u imaan-kartaa, yaase nabada horsed ka noqon kara oo ah dariiqa wadatashiga iyo cadaalada dowladnimada Somalia waxaad arkeeysaa in Roadmapka uu yahay mid ka muuqda sadbuursi iyo cadaalo daro bud-dhigna uu u yahay sharciyeeynta dastuurka qaran oo aaneey umada Somali u dhameeyn.
Baadida nin baa kula daydayi daalna kaa badane ( Puntland ) oon doonahayn inaad hesho daa’in abidkaaye aduunkana moodayaan duul wada dhashoon wax u dahsooneyne.
Muqdisho nabdi ka dheer inta loo diidan yahay in aay qeeyb ka noqdaan soo celinta nabada iyo wadanoolaansha umada Somali, Al-shabab in aay reer Muqdisho iska dhiciyaan waxaa horjooga dowlada uu xilka ka hayo Shariif sabbabta oo ah talada iyo masiirka dowladnimo waxba kuma laha degmooyinka gobolka Banaadir shacabka ku dhaqan.
Sida Madiina iyo Dharkinleey oo ah degmooyinka ugu dadka badan ayaanan qeeyb ka aheeyn talda masiirka dalka ee Roadmapka miyaadan ogeeyn in degmada Madiina iyo Dharkinleey aay degan yihiin in ka badan 1 milyan oo Somalia ah.
Maxaa diiday in gogashii shirkii Roadmapka ee Xalane aayan ka qeeybgelin iyada oo la ogyhay in degaanka Xalane uu hoos yimaado degmada Madiina,16 ka degmo ee Muqdisho haddii aay marti ka yihiin la dagaalanka Al-Shabab iyo soo celinta nabada Muqdisho maxaad u diideeysaa in Muqdisho aay noqoto hooyga gumaadka shacabka Somali ?
Ciidamada waxaa aay dhib xoog leh ku hayaan shacabka Muqdisho ayaga oo labisan dareeyskii ciidamada qaranka oo uu macnaheeda yahay in ciidamada aayan fahansaneeyn macnaha dareeyska qaranka oo la macno ah in aay dhawaac u geeysanayaan sharaftii,heybadii iyo calankii Somalia,sow lama dhihi karo waxaa aay la macno tahay xilka dowladnimo in lagu gumaadaayo shacabka.
Xilka waxaa loo haya kor u qaadida difaaca sharafta shacabka balse ma mudna in shacabka lagu gumaado,loo horseedo cadaalo daro iyo sadbuursi.Garowe waxa ka socdaa maaha mid umada Somali aay aqbali karto waa cadaalo daro iyo sadbuursi uu horsed ka yahay Shariif.
Muqdisho shacabka ku dhaqani ma mudneeyn in sidaa loola dhaqmo balse Tarzan oo ahaa ninka xilka u qaaday ( Gudoomiye/ Duqa ) ayaa noqday nin fahmi waayay xilka uu dadka u hayo balse waxuu u muuqday nin horsed ka ah cadaalo daro iyo sadbuursiga wadadeeda Shariif uu hada u jeexay umada Somali ,waligeedna noqon doonto mid sharciga dastuurka dhameeystirkiisa lagu qori doono,sharciga dastuurka ee lagu dhameeystirayo Garowe ayaa noqon doona mid aayan Somalida la jaanqaadi karin balse ku saleeysan sadbuursi iyo cadaalo daro,ma xaqbaa in xaquuda shacabka gobolada Banaadir,Bay,Bakool,Buaale. Gedo,Kismaayo,sh/hoose,Sh/Dhexe,Hiiraan, Dhuusamareeb Mudug, Hargeeysa, Barbara,Boorama iyo Burco ,Sool iyo Sanaag in Garowe lagu goáamiyo qeeyraadka goboladaa iyo ka talinta goboladaa cidii maamuli laheeyd.
Marba haddii shacabkii degenaa goboladaa aqoon yahaynkii odayadii goboladaa aayan joogin meesha hasha lagu qeeybsanaayay,Alow sahal umuuraha.
Shirka Garowe Xaaraan, Booli & Sadbuursi waa bilowgii cadaalo darada umada Soomaali.
2 thoughts on “Shirka Garoowe: Xaaraan, Booli & Sadbuursi!”